သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူအချိန်လေး - နှုတ်ကပတ်တော်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ
“ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူရှိသည့်အချိန်များ” သည် Q & A ၏ထူးခြားချက်ဖြစ်သည် စကားလုံး မဂ္ဂဇင်း။ 1906 နှင့် 1916 အကြားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမေးခွန်းများကို၏စာဖတ်သူများကအန္တရာယ်ခဲ့ကြသည် စကားလုံး နှင့် Mr. A Percival မှ“ FRIEND” ဟုအမည်တပ်ထားခြင်းဖြင့်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်။ အချိန်ကုန်လွန်လာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏အမည်ကိုအဖြေများရေးသားသူအဖြစ်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ သမိုင်း ၀ င်မှန်ကန်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ ထိုအချိန်ကာလအတွင်းလူကြိုက်များသောပုဒ်ဖြတ်ပုဒ်ဖြတ်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူလက်နှိပ်စက်အမှားများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် The Word Foundation သည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဆဲဖြစ်သော The Word မဂ္ဂဇင်းကိုသုံးလတစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ စာဖတ်သူများမေးသောမေးခွန်းများပါသော“ Moments with Friends” အပိုင်းလည်းပါ ၀ င်သည်။
အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ PDF ဖိုင်ရယူရန် မူလပုံစံ၏ပွားဘို့။
• အာဒံရဲ့နဲ့ဧဝတို့ရဲ့တာဖြစ်ပြီး၏ theosophical အမြင်များဘာတွေလဲ?
• မဆိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လည်းရှိ၏လျှင်, တာဖြစ်ပြီးအကြားချိန်းချက်သောအချိန်ရဲ့အရှည်ကဘာလဲ?
• တစ်ဦး Theosophist ယူသီးမှုအတွက်ယုံကြည်ပါသလား
•a"ကိုဖုံးသောအမြှေး" နဲ့မွေးဖွားများထဲမှအချို့အဘိဥာဏ်ဒြေသို့မဟုတ်မှော်အတတ်တန်ခိုးအားအပိုင်စေခြင်းငှါ၎င်းအယူသီးမှုအတှကျအရှိအဘယ်အရာကိုအခြေခံပါသလဲ
• တစ်ဦးအတွေးအခြားစိတ်ကိုမှကူးစက်စေခြင်းငှါ အကယ်. ဒီအဖြစ်တိကျစွာပြုသောအမှုများနှင့်အတူမအဘယ်ကြောင့်, အဖြစ်သာမန်စကားပြောဆိုမှုအဖြစ်အများကြီးထောက်လှမ်းရေးအပေါ်ယူသွားတတ်၏?
• Vampire နှင့် Vampire ကိုရည်မှတ်ကျနော်တို့အကြောင်းကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်နားမထောင်သောပုံပြင်များအတွက်မဆိုအမှန်တရား, ရှိပါသလား?
• ငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်အသက်တာ၏ချုပ်ထဲမှာရှိမရှိလူမျိုး၏ရုတ်တရက်သေမင်း၏အကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ, ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, အသုံးဝင်မှုနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်း၏နှစ်ပေါင်းများစွာပေါ်လာလိမ့်မယ်သောအခါသူတို့ရှေ့မှာရှိပါသလဲ
• ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကဖြတ်တောက်နေသည်အခါ astral လက်မောင်း, ခြေထောက်, ဒါမှမဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်၏အခြားအဖွဲ့ဝင်ပြတ်မထားလျှင်, အဘယ်ကြောင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်မောင်းဒါမှမဟုတ်ခြေထောက်မျိုးပွားနိုင်မ astral ခန္ဓာကိုယ်ပါသလဲ
• တစ်ဦး Theosophist တစ်သက်သတ်လွတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အသားစားချင်သောသူ၏ပလား?
• မည်သို့အမှန်တကယ် theosophist သူ့ကိုယ်သူတစ် theosophist ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်နေဆဲကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်၏အလိုဆန္ဒများကြောင့်စားသူတဦးတည်း၏ခန္ဓာကိုယ်မှတိရစ္ဆာန်၏အသားထံမှလွှဲပြောင်းဖြစ်ကြောင်းသိကြရသောအခါအသားကိုစားနိုင်မလဲ?
• ကအိန္ဒိယ Yogi နှင့်ဘုရားသခငျ့မှီ၏ယောက်ျား, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ကြောင်းစကားမှန်သည်မဟုတ်, ကိုယ်အသားကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်လည်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များပေါ်တွင်အသက်ရှင်နေထိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်လို့သူသည်မှန်လျှင်, သငျ့သညျကိုမသောသူတို့ကို?
• ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၏စားအသားစားခြင်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက, လူသား၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်အဘယ်အရာကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသနည်း?
• theosophists နှင့် occultists အားဖြင့်ဤမျှလောက်များစွာသောဆက်သွယ်မှုအတွက်အသုံးပြုသောအသုံးအနှုန်းဒြပ်စင်၏အတိအကျအဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ?
• အဘယ်အရာကို "လူ့ကို elemental" ကိုဆိုလိုသနည်း ဒါဟာနှင့်အောက်ပိုင်းစိတ်ထဲအကြားမည်သည့်ကွာခြားချက်ရှိပါသလား?
• အဆိုပါအလိုဆန္ဒများကိုထိန်းချုပ်ရှိတစ်ဦးကို elemental အခြား, အရေးကြီးတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားအခြားဟာခန္ဓာကိုယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထိန်းချုပ်ထား, ဒါမှမဟုတ်သမျှသောဤလူ့ကို elemental ထိန်းချုပ်မှုမရှိသလဲ?
• ယေဘုယျဖြစ်ပေါ်နေသောအဖွဲ့အစည်းအတွင်းဒြပ်စင်များမှာ, သူတို့သည်အီဗိုလူးရှင်း၏သင်တန်းအားလုံးကိုသို့မဟုတ်သူတို့ကိုမဆိုယောက်ျားဖြစ်လာလိမ့်မည်နည်း
• ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောမြင်တတ်သောအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကဆန့်ကျင်အခါတဦးတည်း clairvoyantly ကြည့်ဖို့အတှကျအဖြစ်နိုင်ပါသလဲ
• အဘယ်အရာကို clairvoyance အတွက်အသုံးပြုတဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဘယ်လောက်ကြီးမြတ်အကွာအဝေးမှာသူတို့အား၎င်း, လူသိများမြင်နိုင်ထံမှမသိသောမမြင်ရတဲ့ရန်လက်မှာအနီးရှိအရာဝတ္ထုထံမှလွှဲပြောင်းတဦးတည်း၏ရူပါရုံပါသလဲ
• သူကဒါအလိုတော်နှင့်သူသည်ထိုသို့ပြုမှတစ်ဦး clairvoyant ဒြေကိုအသုံးပြုဖို့ပါဘူးအခါတိုင်းတစ်ဦး occultist အနာဂတ်မှာသို့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသလား?
• တစ်ဦး occultist တစ်ဦးချင်းသို့မဟုတ်စုပေါင်း occultists, လာမယ့်ဖြစ်ရပ်များကိုသူတို့ရဲ့အသိပညာမှအကျိုးမရကြဘူးဘာကြောင့်ကုလားကာထိုးဖောက်နိုင်မယ်ဆိုရင်?
• အဘယ်အရာကိုကို "တတိယမျက်စိ" ဖြစ်ပါတယ်နှင့် clairvoyant နှင့် occultist အသုံးပြုရန်သနည်း?
• အဘယ်သူသည် pineal ဂလင်းကိုအသုံးပြုသည်, နှင့်၎င်း၏အသုံးပြုမှုအရာဝတ္ထုကဘာလဲ?
• ဘယ်လိုတတိယမျက်စိသို့မဟုတ် pineal ဂလင်းပွင့်လင်း, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ထိုကဲ့သို့သောဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပျက်သနည်း?
• ခရစ္စမတ်တစ် theosophist မှမဆိုအထူးသဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည်, ဒါလျှင်အဘယ်ပါသလား?
• ယရှေုသညျအနေနဲ့အမှန်တကယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, သူသည်ခရစ္စမတ်နေ့တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင်းကိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား?
• အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအစား Jesusmass သို့မဟုတ် Jesusday ၏, ဒါမှမဟုတ်တခြားနာမည်ဖြင့်ခရစ္စမတ်ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th, ဒီကိုခေါ်သလဲ?
• ယေရှု၏မွေးဖွားခြင်းနှင့်အသက်တာကိုနားလည်သဘောပေါက်တစ်ခု esoteric လမ်းရှိပါသလား?
• သင်တစ်ဦးနိယာမအဖြစ်ခရစ်တော်၏အမိန့်မြွက်တော်မူ၏။ သငျသညျယရှေု, နဲ့ခရစ်တော်ခြားနားစေသလား?
• ယေရှု၏မွေးဖွား၏အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th နေ့ကကျင်းပအဲဒီမှာအဘယ်အရာကိုအထူးသဖြင့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သနည်း
• ကခရစျတျောဖြစ်လာမှလူသားတစ်ဦးဖြစ်ခြင်းများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါလျှင်, ဘယ်လိုပြည့်စုံသည်နှင့်မည်သို့ဒီဇင်ဘာလ၏ 25th တစ်ရက်နှင့်အတူချိတ်ဆက်သလဲ?
• ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်တစ်ဦးစိတ်ပိုင်းဇာစ်မြစ်ရှိသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖွငျ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်ကုသပေးဖို့မှန်သည်မှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသမှုအားဖြင့်သူတို့အားအယှက်ကိုပျောက်ကင်းစေမယ့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာသိပ္ပံပညာရှင်များအတွက်မှားသလဲ
• အဘယ်သို့သောလမ်းများတွင်တဦးတည်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်သို့မဟုတ်အခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရန်နှင့်အမှန်တကယ်အကြောင်းတရားများကိုတွေ့မြင်ရန်, စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ခရစ်ယာန်သိပ္ပံပညာရှင်များများ၏တောင်းဆိုမှုများငြင်းဆန်နိုင်စွမ်းသနည်း
• အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကုသဖြစ်ပေါ်လာအောင်မပြုခဲ့လျှင်ဤမျှလောက်များစွာသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုသသာယာဝပြောတဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူတို့သည်မိမိတို့အဖြစ်မှမိမိတို့ကိုယ်ကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကိုမဟုတျပါလျှင်, သူတို့ရဲ့လူနာများကိုဆိုတဲ့အချက်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်လော
• ဒါဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များအားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအယှက်ကုသမှုအတွက်, ဒါမှမဟုတ်ပေးခြင်းများအတွက်ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်မှားယွင်းနေသည်ဆိုပါက "သိပ္ပံပညာသင်ကြားရေး," ကကျောင်းမှာဆရာမသင်ယူမှု၏အကိုင်းအခက်မဆိုအတွက်ကျောင်းသားညွှန်ကြားချက်အဘို့ပိုက်ဆံလက်ခံရရှိရန်အတွက်လည်းမှားယွင်းနေသည်မဟုတ်လော
• (အယ်ဒီတာတစ်ဦးစာတစ်စောင်မှာမတ်လ 1907 "သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ဟုမစ္စတာ Percival. -Ed မှနေတုံ့ပြန်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, critiqued ဖြစ်ပါတယ်။ )
• ခရစ်ယာန်က Man တစ်ဦးကခန္ဓာကိုယ်, Soul နှင့်ဝိညာဉ်တော်အားရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ အဆိုပါ Theosophist က Man ခုနစ်အခြေခံမူရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ စကားအနည်းငယ်တွင်ဤခုနစ်အခြေခံမူဘာတွေလုပ်နေလဲ?
• အများစုမှာ spiritualists သူတို့ရဲ့ seances မှာထွက်သွားကြ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူစကားပွောကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ Theosophists ဒီဖြစ်ရပ်မဟုတ်ကြောင်းဆိုရမည်မှာ, မြင်ကြဘာသောဝိညာဉျသပေမယ့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုစွန့်ပစ်သောခရုခွံ, spook သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဘယ်သူသည်မှန်ကန်သောပါသလဲ
• ယောက်ျား၏စိတ်ဝိညာဉ်၌၎င်း၏အလိုဆန္ဒခန္ဓာကိုယ်ကအသေခံပြီးနောက်အကျဉ်းကျင်းပစေခြင်းငှါ အကယ်. အဘယ်ကြောင့်ဤဝိညာဉျသ seances မှာထင်ရှားစေခြင်းငှါအဘယ်ကြောင့်အဲဒါကိုပေါ်လာနှင့်စောင့်နှငျ့စကားပွောပါဘူးဆိုမှားသလဲ
• seances မှာပွဲသေသောနောက်လူ့စိတ်ဝိညာဉ်အားဖြင့် discarnated ခဲ့ကြရာသာအခွံ, spooks သို့မဟုတ်အလိုဆန္ဒအလောင်းတွေ, မှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကသာသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှလူသိများနေတဲ့ဘာသာရပ်အပေါ်စောင့်နှငျ့ဆကျသှယျနိုင်ကြသည်ကြောင်း, ဘာကွောငျ့လဲ ဒါဟာတူညီတဲ့ဘာသာရပ်ထပ်ခါထပ်ခါဆောင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုပါသလဲ
• အမှန်မှာဝိညာဉ်များတခါတရံအမှန်အတိုင်းလည်းနောက်တော်သို့လိုက်လျှင်အားလုံးစိုးရိမ်ပူပန်၏အကျိုးကျေးဇူးမှဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဖြစ်သောအကြံပေးကြဘူးကြောင်းငြင်းဆိုမရနိုင်ပါ။ ဘယ်လို theosophist, ဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်ကိုအခြားဆန့်ကျင်, ဤအချက်များကိုငြင်းပယ်သို့မဟုတ်ကွာရှင်းပြနိုင်မလဲ?
• ဒါကြောင့်မှန်သည်ဆိုပါက Mana မှုခွံ, spooks နှင့်အဖွဲ့အစည်းများသော်လည်းအဘယ်သူမျှပေါ်လာကြောင်း, theosophical သွန်သင်ချက်အရသိရသည် seances မှာဘယ်တချို့နတ်ကတော်ခြောရရှိထားသည့်မကြာခဏအတွေးအခေါ်နှင့် theosophical သဘောသဘာဝ၏သတင်းအချက်အလက်နှင့်သွန်သင်ချက်တွေကိုလာသလဲ
• မည်သို့သေလွန်သောသူတို့သည်မှာအားလုံးပါလျှင်, စားပါသလဲ အဘယ်အရာကိုသူတို့ရဲ့ဘဝထောက်?
• သေလွန်သောသူတို့သည် wear အဝတ်ပါသလား
• သေလွန်သောသူတို့သည်ပြုကျင့်များအတွက်ပြစ်ဒဏ်သို့မဟုတ်ဆုလာဘ်စဉ်ဘဝ၌ဖြစ်စေသေသောနောက်ဖြစ်စေ, ရှိပါသလား?
• သင်မည်သို့သေလွန်သောသူတို့သည်အိပ်မက်အတွက်, ဒါမှမဟုတ်နိုးခဲ့ကြသူတွေကိုမှဖြစ်စေသည်ထင်ရှားရှိသည်ဟုနှင့်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏သေခြင်း, မိသားစုများ၏ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားအဖွဲ့ဝင်များခါနီးတွင်, ကြေညာခဲ့သည်ရှိသည်ဟုဘယ်မှာအမှုပေါင်းရှင်းပြသလဲ?
• မြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအနေဖြင့်၎င်းတို့၏မိသားစုဘာအဖွဲ့ဝင်များမှဆွဲဆောင်သေလွန်သောသူတို့သည်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ထိုသူတို့အပေါ်စောင့်ကြည့်ကြဘူး, သူမ၏ကလေးငယျမြားအပျေါမှာထှကျသှားမိခင်လော
• ဗဟိုရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏နေရောင်နှင့်၎င်း၏ဂြိုလ်ဆုံလည်ခံရဖို့ဟန်န်းကျင်မည်သူမဆိုသိကြပါသလား? ငါက Alcyone သို့မဟုတ် Sirius ဖြစ်အံ့သောငှါကိုဖတ်ပြီးကြပါပြီ။
• အဘယ်အရာကိုတဦးတည်းရဲ့နှလုံးစည်းချက်စေသည်; ဒါကြောင့်လည်းအဘယ်အရာကိုအသက်ရှူအကြောင်းကို, နေရောင်ကနေလှိုင်းတံပိုး၏တုန်ခါမှုဖြစ်သနည်း
• နေရောင်ဒါမှမဟုတ်လ catamenial ကာလထိန်းညှိသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်ပါသလား? မရလျှင်အဘယ်သနည်း
• သငျသညျအကြှနျုပျကိုမီးသို့မဟုတ်မီးလျှံ၏သဘောသဘာဝနှင့် ပတ်သက်. ဘာမှပြောပြနိုင်ပါသလား? ဒါဟာအမြဲတမ်းအများဆုံးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရာဖြစ်ပုံရသည်သိရသည်။ ငါသိပ္ပံနည်းကျစာအုပ်တွေထဲကနေမျှကျေနပ်သတင်းအချက်အလက်ရနိုင်တယ်။
• မည်သို့ရွှေ, ကြေးနီ, ငွေကဲ့သို့သောသတ္တုများကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသနည်း
• သင်တစ်ဦးသိပ္ပံအဖြစ်နက္ခတ်ဗေဒင်ကိုယုံကြည်ပါသလား သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လောက်ဝေးကလူ့အသက်ကိုနှင့်အကျိုးစီးပွားနှင့်စပ်လျဉ်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်သလဲ?
• ဘယ်လိုမွေးဖွားမှာသြဇာလွှမ်းမိုးမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရဲ့ကံကြမ္မာကို, အတ္တ၏ Karma နှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်သလဲ?
• လူ့ Karma, ဒါမှမဟုတ်ကံကြမ္မာကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အလုပ်ခန့်သည့်ဂြိုဟ်လွှမ်းမိုးမှုရှိပါသလား သို့ဆိုလျှင်အဘယ်အရပ်အခမဲ့အတွက်လာကြလိမ့်မည်သနည်း?
• အချိန်ဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ပဉ်စမနေ့ (ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်န်းကျင်သူတို့ရဲ့ကယ်များ၏မွေးဖွားဆင်နွှဲသူကိုမဆိုလူတွေရှိပါတယ်လျှင်သင်နေရောင်နိမိတ်လက္ခဏာ Capricorn ရိုက်ထည့်ဖို့ကဆိုပါတယ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
• ဒါဟာခရစ်တော်၏မွေးဖွားဝိညာဏမွေးဖွားကြောင်းအချို့တို့ကဆိုပါတယ်။ ဒီဒါသည်ဆိုပါက, အဘယ်ကြောင့်ခရစ်စမတ်ဝိညာဉ်ရေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယူအဆအလွန်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောပစ္စည်းလမ်း, စျ, စားသောက်သဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်များအတွက်ကျင်းပကြောင်းဖြစ်သနည်း
• Vol ၏ "သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခဏ" ၌။ 4, စာမျက်နှာ 189, ကခရစ္စမတ်ကဆက်လက်အဖြစ်, အရာ, "အလင်း၏မမြင်ရတဲ့နေရောင်၏မွေးဖွား, ခရစ်တော်နိယာမ" ကိုဆိုလိုသည်ဟု "လူအတွင်း၌မွေးဖွားခံရပါ။ " ဒီဒါသည်ဆိုပါက, ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာပေ ယေရှု၏မွေးဖွားဒီဇင်ဘာနှစ်ဆယ်ငါးရက်နေ့တွင်လည်းရခဲ့သလဲ
• သူပြုမိပါပြီလို့ယူဆတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ယေရှုသို့မဟုတ်ခရစ်တော်အားနေထိုင်ပြီးသင်ပေးခဲ့ပါဘူးလြှငျ, ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောမှားယွင်းမှုတစ်ခုဤမျှလောက်များစွာသောရာစုနှစ်နိုင်ကြပါပြီနိုင်ကြောင်းနှင့်ယနေ့အောင်မြင်သင့်ကြောင်းဖြစ်သနည်း
• သငျသညျနီးပါး 2,000 နှစ်ပေါင်းကမ္ဘာကြီးဟာဒဏ္ဍာရီယုံကြည်သောခဲ့ပြီးခရစ်တော်၏ဘဝတစ်ဒဏ္ဍာရီကြောင်း, ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏သမိုင်းတစ်ဦးဒဏ္ဍရီပေမယ့်အချည်းနှီးဖြစ်၏ဟုပြောနှင့်ဆိုလိုပါသလား
• astral ဥာဏ်ပညာကိစ္စမှတဆင့်မြင်နေနိုင်စွမ်းမှန်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအလတ်စားမရှိဝိညာဉျကိုထိန်းချုပ်ယခုနာမည်ကြီးလိမ္မော်ရောင်ရေတွက်စမ်းသပ်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ကြောင်းကိုလဲ?
• အဘယ်အရာကိုရှင်းပြချက်ဒါမကြာခဏပေါ်ပေါက်သောကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြေငလျင်များအတွက် Theosophy ကမ်းလှမ်းမှုကိုတတ်နိုင်သမျှနှင့်အရာကလူထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုဖကျြဆီးနိုငျသလဲ
• အဆိုပါ pituitary ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
• အဆိုပါ pineal ဂလင်းများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
• အဆိုပါသရက်ရွက်၏အသုံးပြုမှုသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
• အဆိုပါသိုင်းရွိုက်ဂလင်းများအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ် function ကိုကဘာလဲ?
• ထှကျသှားယောက်ျား၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုမိုဃ်းကောင်းကင်ငှက်တို့သည်သို့မဟုတ်တိရိစ္ဆာန်များအတွက် incarnate သည်ဟုဆိုသူမြား၏အရေးဆိုမှုမဆိုမြေပြင်ရှိပါသလား?
• ခြင်္သေ့၊ ဝက်ဝံ၊ ဒေါင်း၊ မြက်မြက်ကဲ့သို့သောတိရိစ္ဆာန်အမျိုးမျိုးကိုထုတ်လုပ်ရန်လူသား၏ကွဲပြားခြားနားသောအတွေးအခေါ်များသည်ရုပ်ဝတ္ထုလောကနှင့်သက်ဆိုင်သည်ကိုသင်ပိုမိုရှင်းပြနိုင်ပါသလား။ စိတ်ထင်။ -Ed မှ။ )
• တဦးတည်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်တွင်းအင်္ဂါ၏အကျင့်ကိုမြင်, ဤလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ဒီတော့လျှင်နိုင်သလား?
• မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဘယ်အရာကိုမှတ်အတွက် astral လောကဝိညာဏအကှာခွားသနညျး ဤဝေါဟာရများကိုမကြာခဏကဤဘာသာရပ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်စာအုပ်တွေနဲ့မဂ္ဂဇင်းအတွက်အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးပြု, ဤအသုံးပြုမှုကိုစာဖတ်သူရဲ့စိတ်ကိုရောထွေးဖို့ apt ဖြစ်ပါတယ်နေကြသည်။
• ကိုယ်ခန္ဓာ၏အသီးအသီးအင်္ဂါတစ်ရပ်အသိဉာဏ် entity ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ပါကအလိုအလျှောက်၎င်း၏အလုပ်လုပျသလဲ
• ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အသီးအသီးအင်္ဂါသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစိတ်ထဲမှာကိုယ်စားပြုသည်ဆိုပါကသူသည်သူ၏စိတ်ကိုအသုံးပြုခြင်းရှုံးရသောအခါ, ထို့နောက်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးရူးလူတစ်ဦးသည်သူ၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုအသုံးပြုခြင်းဆုံးရှုံးဘဲနေရသနည်း
• ဒါဟာနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆနျ့ကငျြထင်မြင်ချက်များဆိုအမှန်တရားကိုရည်မှတ်ညာဘက်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မထင်ထားဘူး။ အဘယ်ကြောင့်အချို့သောပြဿနာများသို့မဟုတ်အမှုအရာအရာမှာဤမျှလောက်များစွာသောထင်မြင်ယူဆချက်ရှိသနညျး ငါတို့သည်အဘယ်သို့ဖြောင့်မတ်သောအထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြနိုင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အမှန်တရားဖြစ်သနည်း
• အဘယ်ကြောင့်အဖိုးတန်ကျောက်များနှစ်တွင်အချို့လအတွင်းဖို့တာဝန်လဲ? ဤလူမျိုး၏ဖန်စီထက်တခြားဘာမှမကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သလဲ?
• စိန်သို့မဟုတ်အခြားကျောက်မြတ်ပိုက်ဆံရဲ့ standard ကကိုယ်စားပြုနေပါတယ်သောအရာထက်အခြားတန်ဖိုးရှိသနည်း နှင့်, ဒါပါလျှင်တစ်ဦးစိန်သို့မဟုတ်အခြားထိုကဲ့သို့သောသောကျောက်၏တန်ဖိုးမူတည်ပါဘူးအရာပေါ်?
• အဆိုပါ Atlanteans ပျံသန်းနိုင်မယ့်ယုံကြည်ချက်ရှိသည်မဟုတ်လော သို့ဆိုလျှင်အဘယ်အရပ်ထိုကဲ့သို့သောယုံကြည်ချက်ဖော်ပြထားသလဲ?
• ဝေဟင်အညွှန်း၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်သူတစ်ဦးချင်းစီ, Atlanteans ဝငျစားပါသလား?
• အဆိုပါ Atlanteans ဝေဟင်အညွှန်းများ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခဲ့, ယခုတူညီတဲ့ပြဿနာနှင့်အတူစိုးရိမ်ပူပန်နေသောသူတို့ကို Atlanteans ခဲ့ကြသည်လျှင်, အဘယ်ကြောင့်ဤအလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်း Atlantis ၏နစ်မြုပ်ကတည်းကနှင့်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မရောက်မှီအဝငျစားမလာကြနဲ့သူတို့ကရှေ့တော်၌ဝငျစားကြပါလျှင်ပါလျှင် လက်ရှိအသက်အရွယ်အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကလေကြောင်းကျွမ်းကျင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မရောက်မှီအပျံသန်းနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
• ငါတို့သို့မဟုတ်ကျနော်တို့ ATMA-buddhi နှင့်အတူပြည်ထောင်စုအတွင်းဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လော
• မှောင်မိုက်ကိုအလင်း၏မရှိခြင်းသည်, သို့မဟုတ်ပါကသူ့ဟာသူအတွက်သီးခြားအရာတစ်ခုခုသည်နှင့်အလင်း၏အရပျကိုယူပြီးသော? သူတို့ကွဲပြားနှင့်သီးခြားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မှောင်မိုက်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အလင်းဖြစ်၏ကဘာလဲ?
• radium, ဘယ်လို၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အာဏာနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မဆိုသိသာစွန့်ပစ်အရှုံးမရှိဘဲအဆက်မပြတ်တို့သည်ကြီးစွာသောစွမ်းအင်ကိုချွတ်ပစ်ရန်, နှင့်၎င်း၏အလွန်ကြီးစွာသောရေဒီယိုသတ္တုကြွ၏အရင်းအမြစ်ကဘာလဲထိုသို့ဖြစ်နိုင်ကဘာလဲ?
• အခြားမည်သည့်လူသိများမျိုးစိတ်ထံမှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနှင့်ကွဲပြားဟင်းသီးဟင်းရွက်, သစ်သီးသို့မဟုတ်စက်ရုံတစ်မျိုးစိတ်အသစ်, ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါသလား? ဒါကြောင့်ဆိုပါကမည်ကဲ့သို့ပြုမိပါသလဲ?
• ဒါကြောင့်စိတ်ကိုထဲကအတွေးထားရန်ဖြစ်နိုင်ပါသလော ဒါကြောင့်လျှင်ဤကိုဘယ်လိုအမှုကိုပြုသဖြင့်, ဘယ်လောက်တဦးတည်းက၎င်း၏ထပ်မဖြစ်အောင် preent နှင့်စိတ်ထွက်စောင့်ရှောက်နိုင်သလဲ
• အဆိုပါလျှို့ဝှက် Societies မှပိုင်ဆိုင်သည်၎င်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အတွက်စိတ်ထဲ retarding သို့မဟုတ်တိုးတက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါသလား ဒါကြောင့်အချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါသလော
• အဘယ်ကြောင့်လူတွေအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရရန်ကြိုးစားသလဲ? ဘယ်လိုအချည်းနှီးအရာတစ်ခုခုကိုရဖို့ပေါ်လာသူတွေကိုသူတို့ get အရာကိုပေးဆောင်ဖို့ရှိသည်သလဲ?
• Theosophy နှင့် New အတွေးအခေါ်အကြားမရှိမဖြစ်ကွဲပြားခြားနားမှုဘာတွေလဲ?
• ကင်ဆာများ၏အကြောင်းရင်းကဘာလဲ? ထိုသို့ဆိုလူသိများရောဂါပျောက်ကင်းရှိပါသလားသို့မဟုတ်ယင်း၏ရောဂါပျောက်ကင်းထိခိုက်စေနိုင်သည်မတိုင်မီကုသမှုအချို့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့ရှိသည်လိမ့်မည်နည်း
• အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးသည်မြွေကွဲပြားခြားနားသောလူများကဒါကွဲပြားခြားနားမှတ်သလဲ? တစ်ခါတစ်ရံတစ်ဦးသည်မြွေသည်ပညာ၏သင်္ကေတအဖြစ်ကိုအခြားအချိန်များတွင်, မကောင်းသောများ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်၏ပြောပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ယောက်ျားသည်မြွေ၏ထိုကဲ့သို့သောဟာမွေးရာပါကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပိုင်သနည်း?
• အဆိုပါ Rosicrucians အစဉ်အဆက်မီးခွက်ကိုမီးရှို့သောပုံပြင်များအတွက်မဆိုအမှန်တရားရှိပါသလား? ဒါကြောင့်ဆိုပါကမည်ကဲ့သို့သူတို့လုပ်ခဲ့ကြသည်, အဘယ်အရာကိုရည်ရွယ်ချက်သူတို့အစေခံခဲ့သလဲ, အခုသူတို့ လုပ်. အသုံးပြုနိုင်သလဲ
• ယခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာ၏အမျိုးသားရေးအထိမ်းအမှတ်အဖြစ်အသုံးပြုနှစ်ဆဦးဆောင်သောရွှေလင်းတမများနှင့်အရာကမျြးစာအကြိမ်ရှေးဟောင်းဟိတ္တိ၏အထိမ်းအမှတတွင်တွေ့သည်ယောက်ျား၏ androgynous ခွအေနအေမှညှနျး?
• လေးပါးရပ်ကွက်နှင့်တော်ဝင် Arch အခန်း၏ Mason အဓိကကြောကျတုံးပျေါမှာစက်ဝိုင်း၏တစ်ဝက်ရပ်ကွက်မှာစာလုံး HTWSSTKS သူတို့ရာသီခွင်မဆိုနှင့်စပ်လျဉ်းဖူးကြသည်, ထိုစက်ဝိုင်းပတ်လည်မှာမိမိတို့၏ရာထူးအဘယ်အရာကိုညွှန်ပြသလဲ?
• အဆိုပါ hibernating တိရိစ္ဆာန်များ hibernation သူတို့ရဲ့ကြာရှည်စွာနေစဉ်အတွင်းအစားအစာမပါဘဲနှင့်ပုံလေကြောင်းမပါဘဲဘယ်လိုအသက်ရှင်နေထိုင်သလဲ?
• အဆုတ်နှင့်အတူတိရစ္ဆာန်အသက်ရှူမပါဘဲအသက်ရှင်နိုင်သလော သို့ဆိုလျှင်မည်သို့အသက်ရှင်နေထိုင်သနည်း?
• သိပ္ပံသည်လူအစားအသောက်နှင့်လေကြောင်းမပါဘဲအသက်ရှင်နိုင်သောမည်သည့်ပညတ်တိကအသိအမှတ်မပြုပါဘူး; ဒါသည်မှန်လျှင်, လူတို့သညျဒါနေထိုင်ခဲ့လျက်တရားတော်ကိုကားအဘယ်သို့ပြီလော
• လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇီဝကမ္မသို့မဟုတ်အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူမည်သည့်စာပေးစာယူနှစ်, လ, ပတ်ရက်, နာရီ, မိနစ်, စက္ကန့်သို့ယင်း၏ကွဲပြားမှုအတွက်အချိန်ရှိသနည်း သို့ဆိုလျှင်သက်ဆိုင်ရာဘာတွေလုပ်နေလဲ?
• လူကတဆင့်နထေိုငျ၏တာဝန်များကိုပြီးအောင်, ဤမြေကြီးပေါ်မှာရှိသောအနှစ်သည်သူ၏ချထားပေး span ကာလအတွင်းတစ်ဦးထက်ပိုဘဝကိုမှသေဆုံးနိုင်ပါသလား?
• , မှော်ဖြစ်စဉ်များအသုံးပြုပုံလက်အားဖွငျ့ကွန်ကရစ်ပုံစံသို့မူလတန်းကိစ္စယူဆောင်နိုင်ပါတယ်; ဒါသည်မှန်လျှင်, အထူးသဖြင့်အဘယ်အရာကိုပုံစံထုတ်လုပ်နိုင်ပြီးဘယ်လိုအမှုကိုပြုသလဲ?
• အဘယျသို့သောနံ့သာပေါင်း၏သဘောသဘာဝဖြစ်တယ်, အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးကအသုံးပြုခဲ့သနညျး
• တရားအားထုတ်နေစဉ်အတွင်း, နံ့သာပေါင်းရှို့မီးလောင်ရာမှဆင်းသက်လာမည်သည့်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိပါသလား
• နံ့သာပေါင်းကိုမီးရှို့ခြင်း၏သက်ရောက်မှုများလေယာဉ်မဆိုအပေါ် observable ဖြစ်ပါသလား
• အဘယ်အရာကိုအရောင်များ, သတ္တုနှင့်ကျောက်များခုနစ်လုံးကိုဂြိုလ်မှစွပ်စွဲနေကြသနည်း
• အရောင်များ, သတ္တုနှင့်ကျောက်ခဲတို့ကိုဝတ်ဆင်ထားသင့် wearer မွေးဖွားခဲ့သည်ထားတဲ့အောက်မှာကြောင်းဂြိုဟ်ရဲ့ရှုထောင့်ကဆုံးဖြတ်ရမည်လော
• အရောင်များ, သတ္တုနှင့်ကျောက်များမဆိုအထူးသီလရှိသည်, ဘယ်လိုသူတို့ကဂြိုလ်နှင့် ပတ်သက်. မရှိဘဲဝတ်ဆင်ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
• အဘယ်အရာကိုစာလုံးများသို့မဟုတ်နံပါတ်များဂြိုလ်တွဲသို့မဟုတ် ascribed နေကြသနည်း
• လူသည် macrocosm တစ် microcosm, သေးသေးလေးထဲမှာဝဠာလား? ဒီတော့လျှင်, ဂြိုလ်များနှင့်မြင်နိုင်သောကြယ်ပွသူ့ကိုအတွင်းကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဘယ်မှာတည်ရှိနေကြသနည်း
• အဘယ်အရာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာရေးကိုဆိုလိုသနည်း ဒါဟာလူသားရဲ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဝိညာဉ်အစွမ်းသတ္တိ၏ equilibrium ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ဘယ်လိုချိန်ခွင်လျှာထိန်းသိမ်းထားသလဲ?
• ကလူကိုစိတ်ဝိညာဉ်သည်၎င်း၏အိပ်မက်ပြည်နယ်ဝင်စေခြင်းငှါ, မသိစိတ်ကသူ့ရုပ်ခန္ဓာစွန့်ခွာရန်အဘို့အအကောင်းဆုံးလား?
• မိမိအသက်ဝိညာဉ်ကိုလူရဲ့အကြိုက်နှင့်မကြိုက်ထင်ဟပ်ဖြစ်ပါသလား သို့ဆိုလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့ကရောင်ပြန်ဟပ်နေကြသနည်း မထားလျှင်, အဘယ်ကဤအကြိုက်နှင့်မကြိုက်ငှါလာသလော
• ဒါကြောင့်တစ်ဦးသောသူသည်မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒများကိုဖိနှိပ်သင့်တယ်, သူသည်အိမ်မထောင်ဘဲနေခြင်း၏အသက်တာကိုအသက်ရှင်ဖို့ကွိုးစားသငျ့ကွောငျးကိုအကောင်းဆုံးလား?
• အဘယ်အရာကိုအပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြု၏ဒေသနာ၏ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်, မည်သို့ Karma ၏ဥပဒေနှင့်အ ပြန်. ဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
• အဘယ်အရာကိုရယ်မောခြင်းဖြစ်ပြီး, အဘယ်ကြောင့်လူတွေရယ်သလဲ?
• အဘယ်အရာကိုသံလိုက်နှင့်မြေထုဆွဲအားများအကြားစပ်လျဉ်းဖြစ်ပြီး, မှာအားလုံးပါလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့က, ကွာခြားသလဲ? အဘယ်သည်သံလိုက်နှင့်တိရစ္ဆာန်သည်သံလိုက်အကြားစပ်လျဉ်းဖြစ်ပြီး, မှာအားလုံးပါလျှင်ဘယ်လောက်သူတို့က, ကွာခြားသလဲ?
• တိရိစ္ဆာန်သံလိုက်, Mesmerize နှင့်ညှို့ related ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဒါသည်မှန်လျှင်, ဘယ်လိုသူတို့ related နေကြသနည်း
• ဘယ်လိုတိရိစ္ဆာန်သံလိုက် activated နိုင်ပါတယ်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အသုံးပြုမှုကြောင့်ခံရမည်နိုင်သလဲ
• အနံ့၏အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲ, ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြုမူသလဲ, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမှုန်ဟာအာရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုထိတွေ့ဆက်ဆံဘူး, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလူနေမှုအတွက်ကစားအနံ့သနည်း?
• စိတ်ကူးယဉ်ကဘာလဲ? ဘယ်လိုစိုက်ပျိုးနှင့်အသုံးပြုသောဘယ်သို့ရနိုင်သနည်း
• အဘယ်အရာကိုကင်ဆာနှင့်ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်, ထိုသို့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါတယ်လျှင်, ရောဂါပျောက်ကင်းကဘာလဲ?
• အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်အဘို့အ proselytize ကြှနျုပျတို့ကိုတိုကျတှနျးထား? အဘယ်အရာကိုအတိုင်းအတာအထိကျမတို့တခြားသူတွေရဲ့သူတို့အားကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဆန့်ကျင်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသနည်း
• အဘယ်အရာကိုများသောအားဖြင့်ဆိုတဲ့ဝေါဟာရကို "Soul" ကိုဆိုလိုခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ဟူသောဝေါဟာရကိုတော့ Soul အသုံးပြုသင့်သလဲ
• နှစ်ဦးစလုံးအခိုင်အမာမျှသာယုံကြည်ခြင်းအပေါ်မှာလက်ခံခဲ့သည်ခံရဖို့ရှိသည်အတွက်ငရဲမှာတစ်ဦးလက်စားချေသောကြောင့်ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ Theological ကြေညာချက်နဲ့တန်းတူ, karmic လက်စားချေအဖြစ်မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့ဆငျးရဲဒုက်ခ၏ Theosophical အယူဝါဒမျှမက, နှင့်နောက်ထပ်တစျကငျြ့ဝတျကောငျးမွတျထုတ်လုပ်ရန်အခြားအဖြစ်နှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်ကောငျးသလဲ